Ukurhweba kweMargin (nge-LEVA) kwenziwa njani kwi-Binance? -Cazoo
Ukurhweba kweMargin (nge-LEVA) kwenziwa njani kwi-Binance?
Ikhaya » Ikhaya » Ukurhweba kweMargin (nge-LEVA) kwenziwa njani kwi-Binance?
tag: Binance, Uxhathiso, UkuThengiswa kweMargin
Ixesha lokufunda: <1 ngomzuzu
Yintoni i urhwebo lwangaphandleKuthetha ukuthini ukwenza urhwebo lwemida kwiBinance? Okokuqala kufuneka uvule ipotifoliyo yorhwebo lwemida apho uya kugalela umda, kwaye kuya kufuneka uye uthathe imali mboleko nganye sebenza kwi ithatha, ukuhamba ixesha elide okanye ukufutshane, emva koko uthenge kuba siqinisekile ukuba ixabiso liza kunyuka, okanye ukuthengisa kuba siqinisekile ukuba liza kwehla.
Inqaku lokuqala: akukho mntu ufuna ityala, kwaye obu buchule bukunyanzela ukuba uthathe imali mboleko ekuya kufuneka uyihlawule ngenzala.
Inqaku lesibini: inqanaba lomngcipheko liphezulu ngokumangalisayo. Ndibhala la manqaku ukukhumbula amanyathelo kunye nobuchule, kodwa ngabarhwebi abanamava kuphela abanokusebenzisa olu hlobo lokusebenza.
Inqaku langaphambiliYintoni i-Binance Smart Chain, kwaye idibana njani neMetamask
Inqaku elilandelayoI-Binance Coin (BNB): Uphawu lwendalo lolona tshintshiselwano lukhulu lwe-crypto emhlabeni